शिक्षकले बुझ्नुपर्ने कुरा - विवेचना
शिक्षकले बुझ्नुपर्ने कुरा
March 11, 2018 2,391 Views
संसारका सबै मानिस फरक हुन्छन् । अनुहार फरक । मस्तिष्क फरक । विचार फरक । बुझाइ फरक । सोचाइ फरक । क्षमता फरक । रुचि फरक । मन फरक । तरिका फरक । एउटै वस्तुलाई पनि फरक फरक हेराइ । विज्ञानले भनेको । शिक्षकले बुझ्नुपर्ने ।
कक्षामा कति थरी विद्यार्थी छन् ? पारिवारिक भिन्नता । भौगोलिक भिन्नता । जातीय भिन्नता । संस्कारगत भिन्नता । वर्गीय भिन्नता । आर्थिक अवस्थागत भिन्नता । शैक्षिक स्तरगत भिन्नता । जिनगत भिन्नता । यही भिन्नता व्यक्तिको सिकाइ क्षमतामा विशेष महत्व राख्दछ । यसैले कोही गणितमा जान्ने छन् । नेपालीमा कमजोर । कोही अंग्रेजीमा सिपालु छन् । विज्ञानमा लद्दु । कसैलाई गीत गाउन मन पर्छ । कोही नाच्न जान्दछन् । कसैले राम्रो चित्र बनाउ“छन् । कोही कविता कोर्छन् । खेलकुदमा राम्रा पनि छन् । कोही तर्क गर्न रुचाउ“छन् । खोज अनुसन्धान गर्न कोही अघि सर्छन् । कोही एक्लै बसेर पढ्न । कसैलाई टिभी हेरेर पढ्न मन हुन्छ । कोही शान्त वातावरणमा ।
कक्षाकोठा समाजको प्रतिनिधि हो । संसारको प्रतिनिधि । त्यहा“ संसार अटेको छ । शिक्षक ती सबैलाई बुझ्ने हुनुपर्छ । हामीले हिन्दी सिनेमा ‘तारे जमिन पर’ हेरेकै छौ“ । सबैलाई एउटै स्वाद मिठो लाग्दैन । एउटै औषधि सबै रोगमा काम लाग्दैन ।
शिक्षण गर्नु भनेको उपचार गर्नु हो । शिक्षण र उपचारमा समानता छ । चिकित्सकले रोगको हिस्ट्री केलाउ“छ । शिक्षकले क्षमताको हिस्ट्री । पूर्वज्ञानको हिस्ट्री । उमेर समूहको हिस्ट्री । उमेर समूहका विशेषता । कुन उमेर समूहमा कस्तो व्यवहार । कस्तो शिक्षण विधि । हामीले सबै विषयका सबै कक्षाहरूमा एउटै विधि अपनाएका छौ“ कि !
नेपालको शैक्षिक उपलब्धि १०-१५ प्रतिशत मात्रै छ रे ! अर्थात् सय जनाले पढे भने बढीमा १५ जनाले मात्रै पढाइबाट जीवन चलाएका छन् । अध्ययनले देखाएको । यो दर विकसित राष्ट्रहरूमा ९० प्रतिशत सम्म हुन्छ । अर्थात् पढाइ अनुसारको काम पाउ“छन् ।
हो, राज्यले रोजगार दिन सकेन । सबैले काम पाएनन् । अवसर कम छ । आर्थिक लगानी पर्याप्त छैन । सम्भावना छैन । शिक्षित बेरोजगार छन् । अर्कै पाटो । विज्ञले बुझ्ने कुरा । नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा । कक्षाकोठा बाहिरको कुरा । तर कक्षाभित्रको ? हाम्रो कुरा । शिक्षकको कुरा ।
हाम्रो शैक्षिक प्रणाली ठिकै छ । प्रणालीको उपलब्धि ? पाठ्यक्रम र्हेयौ“ ? सक्षमतामा आधारित । त्यो भनेको के ? नराम्रो छैन । शैक्षिक प्रणालीले सबैलाई अवसर दिएको छ । सबैको क्षमता पहिचान गर्न भनेको छ । क्षमता अभिवृद्धि गराउन निर्देशन दिएको छ । अनि कार्यान्वयन ? पढाइमा गरिएको खर्च स्वाहा !
हुन पनि हो । देशका युवा पलायन हुने क्रम जारी छ । पढेका पनि । नपढेका पनि । विदेश जाने कति नेपालीले पढाइ अनुसारको काम पाएका छन् ? कारण ? सिकाइमा मल्टिपल इन्टेलिजेन्स । उपेक्षित उपचार । उसले आफ्नो क्षमता विकास गर्न पाएन । प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर पाएन । बाल्यकालमा उसले प्रतिभा बताउन खोज्यो । जिज्ञासा राख्यो । प्रश्न सोध्यो । उत्तर पाएन । चित्त बुझेन । पर्खियो । धैर्य र्गयो । कुनै दिन आफ्नो भावनाको कदर हुने कुरामा ऊ आशावादी बनिरह्यो । विडम्बना, कहिल्यै उसको क्षमताले विकास हुने अवसर पाएन । उत्तर पाएन । गणितका सूत्र मात्रै पढाइ बन्यो । नेपालीका निबन्ध मात्रै पढाइ बने । उसले क्रिकेटमा जिल्ला जितेर स्कुलको नाम कमाएको कुरा ओझेलमा र्पयो । नृत्यमा ताली पाएको, चित्रमा नया“ आविष्कार गरेको र बि बोइङ गरी सबैलाई मनोरञ्जन दिएको कुरा मार्कसिटमा देखिएन । फेल भयो । गणितमा २ ल्यायो । नेपालीमा ४ ल्यायो । निर्धारण गरियो । त“ फेल । केही जान्दैन । पढेर खा“दैन ।
अर्को तर्फ । रट्छ । खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट छैन । गीत गाउन जान्दैन । अगाडि गएर बोल्न डराउ“छ । किताबको किरो । बुकिस । रटेर सयमा सय ल्यायो । निबन्ध लेख्यो । प्रथम भयो । जान्ने ठहरियो !
भोलिको संसारलाई कस्ता मानिस चाहिएको छ ? अनि हामी कस्ता मानिस उत्पादन गर्दै छौ“ ? टिभी च्यानल त हेरेकै छौ“ । प्रतिभाका क्षेत्र विस्तारित भइरहेका छन् । टिभीमा चित्र बनाउनेले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेको छ । नया“ सोच । नया“ प्रस्तुति । नया“ नया“ प्रतिभा । गुणस्तरीय जीवनका लागि मार्कसिट नै काफी हो त ?
नेता र अभिनेता दुवै चाहिन्छ । सबै पेसा गर्नेलाई मनोरञ्जन दिने पनि चाहिन्छ । शिक्षक पनि चाहिन्छ र दीक्षक पनि । इन्जिनियर पनि चाहिन्छ । डाक्टर पनि । कलाकार पनि चाहिन्छ । समाजसेवी पनि । मोनिटर छानौ“ त, कतिले हात उठाउ“छन् ? कोही सानोतिनो दुर्घटनामा परोस् कक्षामा, सहयोगी कति हुन्छन् ? सायद फस्ट हुनेहरू डराएर भाग्छन् । लद्दुले बिरामीलाई बोकेर अफिस लैजान्छ । उसलाई पानी छ्यापिदिन्छ । के हो ? यति त हामी बुझ्न सक्छौ“ कि ! हामी आफ्नो बुझाइ लाद्न खोज्छौ“ । आफ्नो कुरा सिकाउन खोज्छौ“ । हामीले पहिल्यै बनाएका छौ“ — फम । मान्छे हाल्ने सा“चो । हाम्रो फममा जबरजस्ती ल्याउन खोज्छौ“ । सा“चोभित्र पस्यो । मान्छे बन्यो । अटाएन । अमान्छे बन्यो । बिग्रियो हाम्रो बुझाइमा । अनि ऊ भा“चिन्छ । फुट्छ । टुक्रिन्छ । भएको यही हो । उसलाई उसकै फममा सजिन दिऔ“ । त्यही फमलाई सजावट गरौ“ । कुरा सकिन्छ । क्षमताको विकास । प्रतिभाको प्रस्फुटन ।
संसारमा जति मानिस छन् त्यति नै बाटा छन् । प्रत्येकले आफ्नो बाटो आफै“ लिएर आएको हुन्छ । त्यही बाटोमा हि“ड्न दिऔ“ । बालकको आफ्नै बाटोमा । अनर्थ नलागोस् । बालकले खराब र असल छुट्याउन सक्दैन । ऊ फलो अप गर्छ हाम्रो । कुन विषयमा रुचि छ । कुन विषयमा दक्षता छ । कस्तो मनोविज्ञान छ । के कुरामा दक्षता हासिल गर्न सक्छ । यो पहिचान गरौ“ । विधि अपनाऔ“ । विधि परिवर्तन गरौ“ । विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि । विद्यार्थी सक्रिय । शिक्षक सहजकर्ता ।
चाइनिज भनाइ हेरौ“ : शिक्षक दौडियो भने विद्यार्थी हि“ड्छ । शिक्षक हि“ड्यो भने विद्यार्थी बस्छ । शिक्षक बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ । यसको अर्थ शिक्षकले विद्यार्थीलाई काम दिइरहनुपर्छ । अनुगमन गरिरहनुपर्छ । हौसला दिइरहनुपर्छ । तर विद्यार्थी सक्रिय भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहनुपर्छ । शिक्षकले बुझ्नुपर्ने । भनाइ हो – बालबालिका आफै“ बिग्रि“दैनन् ।
(लेखक कर्णाली एजुकेशन फाउन्डेसन, बुद्धशान्तिका प्राचार्य हुन् ।)
लेखकलाई फेसबुकमा भेट्नुहोस् : gangaram.gadtoula
Previous भारतमा इच्छा मृत्युलाई स्वीकृति
Next अमेरिकी फौज सबैभन्दा शक्तिशाली, नेपालको स्थान कहाँ ?
Pingback: Voodoo business spell
Pingback:9maya 2812
Pingback: анальный секс девушки фото бесплатно
Pingback: what type of benadryl for dogs
Pingback: Prazdniki s 25 dekabrya po 14 avgusta
Pingback: kakoi segodnja prazdnik
Pingback: 25 marta prazdnik
Pingback:5sekretov pornozvezd
August 16, 2017 38,041
March 28, 2018 15,827
August 19, 2017 9,306
Adult dating in india: Adult dating in india [...]here are some links to internet sites that we link to...
Svapo: Svapo [...]Sites of interest we'vealink to[...]...
Sigarette Elettroniche: Sigarette Elettroniche [...]Every the moment inaalthough we choose blogs that...
bmw vin decoder: bmw vin decoder [...]Wonderful story, reckoned we could combineahandful of unr...
bmw vin decoder: bmw vin decoder [...]here are some hyperlinks to websites that we link to due to...